सकारात्मक बनौं, चिन्तामुक्त होऔं - Tulsipur Online
सकारात्मक बनौं, चिन्तामुक्त होऔं
Posted by News Desk | ११ पुष २०७७, शनिबार १४:३४ |
आजको समयमा प्रायः मानिस चिन्तामा डुबिरहेका हुन्छन् । कति मान्छेहरु भन्ने गर्छन, मलाई त केही चिन्ता छैन । तर, उसको पनि कुनै न कुनै कुराले मनमा चिन्ता भईरहेको हुन्छ । चिन्ताले भित्र–भित्र सताईरहेको हुन्छ ।
र, कुनै मान्छेहरु भन्ने गर्छन, मलाई धेरै चिन्ता छ । मलाई चिन्ताले न त भोक नै हुन्छ , न त मलाई रातमा निन्द्रा नै । मनमा एक प्रकारको डरले डेरा गरेर बसेको हुन्छ । जति कोशिष गरे पनि चिन्ताले छोड्दैन ।
वास्तवमा चिन्ता के हो त ?
यस्तो होस, यस्तो नहोस : यो भईदिए हुन्थ्यो, यो नभईदिए हुन्थ्यो । कुनै चिजमा ‘कन्ट्रोल’गर्न खोज्नु, कुनै मान्छेलाई ‘कन्ट्रोल’ गर्न खोज्नु चिन्ताको अर्थ हुन्छ । हामीले परिस्थितिलाई ‘कन्ट्रोल’ गर्न चाहान्छौ, कसैले हामीलाई केही नराम्रो भन्यो भने उसले मलाई किन भन्यो ?, मैले त केही नराम्रो गरेको थिएन तरपनि किन यस्तो भन्यो, किन नराम्रो शब्द बोलेर मेरो मन दुखायो ? किन पिडा दियो ? भनेर त्यही कुरालाई बढि सोँच्ने गर्छौ । त्यो बारेमा धेरै सोच्ने गर्छौ ।
सबै भन्दा पहिले आफूले आफूलाई बदल्न सिक्नु पर्छ । भन्ने ले त के भन्छ, भन्छ । त्यही कुरा सोचेर त्यसको मतलब गरेर बसिराख्यौँ भने झन चिन्ता हुन्छ । झन पिडा हुन्छ । जस्ले जे भन्छ भनोस, जे गर्छ गरोस्, कुनै मतलब गर्नु हुदैन, हामीले आफूले आफुलाई बदल्न सकियो भने, हामीले आफूले आफूलाई बदल्न सुरु ग¥यो भने त्यही दिनबाट बाहिरी दुनिया पनि आफै बदलिन्छ ।
कोही मान्छेको जिन्दगीमा कुनै दुःख आउछ , समस्या आउछ, ति मान्छेहरु धेरै तनावमा हुन्छन् । धेरै टुक्रन्छन् । धेरै दुःखी हुन्छन् र धेरै चिन्तित पनि हुन्छन् । तिनिहरुले सोच्छन् अब केही पनि बाँकी छैन । सवै सकियो, खत्तम भयो भनेर धेरै चिन्ता गर्नाले कुनै समस्याको समाधान हुदैन् । तर चिन्ता गर्नाले हाम्रो आज चै अवश्य खराव हुन्छ । हामीले चिन्ता गरेर के पाउँछौँ ?
चिन्ता गर्नाले हामीलाई भोलिको खुसी मिल्दैन । तर, चिन्ता गर्नाले हामीलाई भोलीको खुशी अवश्य गुमाई रहेका हुन्छौ । एउटा मात्रै सोचिरहेर दिमागमा एउटा मात्रै कुरा राखेका हुन्छौं । एउटै कुरा मात्र दिमागमा राखि रहदा विस्तारै हाम्रो सोचिरहने बाँनी बस्दै जान्छ । त्यो नै हाम्रो स्वभाव बन्न पुग्छ । हामी सानो–सानो कुरामा पनि चिन्तामा डुब्न थाल्छौ ।
सानो–सानो कुराले हामीलाई सताईरहन्छ । सानो भन्दा सानो कुराले पनि हामीलाई पिडा हुन्छ । र हामीलाई हरेक कुरामा पनि तनाव हुन थाल्छ । जव हाम्रो यस्तो वानीको विकास हुन्छ , वानी लाग्छ, चिन्ताले हाम्रो मनमा डरत्रास, मात्र उत्पन्न गराउछ । वेचैन बनाउछ, हाम्रो मनमा छटपटी ल्याउछ । र,हामी भित्र त्यो चिन्ताले दुःख ल्याउछ । चिन्ता गर्नाले हामीलाई कहिले पनि खुसी मिल्दैन ।
हो, चिन्ता हुँदा धेरै नै गाह्रो हुन्छ । मलाई पनि हुन्थ्यो सानो–सानो कुरामा पनि कसैले केही नराम्रो भन्यो भने एकदमै मन दुख्थ्यो, मैले त केही भनेको थिइँन, गल्ति गरेकी थिइँन । तर, पनी मलाई किन यस्तो ग¥यो, किन यस्तो भन्यो भनेर धेरै नै सोच्ने गर्थे । आजभोली लाग्छ जस्ले जे भने पनि केही फरक पाएनौं । जस्ले भन्छ भनोस्, जस्ले जे गर्छ गरोस्, कुनै मतलब गर्नु हुदैन । आफु सही हुनुपर्छ बोल्नेले त जे पनि बोल्न सक्छ । जे पनि भन्न सक्छ, तर आफुलाई कुनै पनि कुराको फरक पर्न हुँदैन । आफूले सही बाटो रोेज्नु पर्छ ।
र सबैकालागि त कहाँ राम्रो बन्न सकिन्छ र फेरि हामी राम्रो गर्न खोजेपनि कुनसा अवार्ड पाएका हुन्छौ र कुनै न कुनै कुराले त मान्छेहरु नराम्रो भनि नै हाल्छन् । अरुले के बोल्यो ?, के भन्यो भनेर त्यही कुरा सम्झिएर आफ्नो दिमागलाई खलबलिन दिनु हुदैन । बोल्ने ले त बोल्यो त्यो उसको कुरा हो । तर दिमाग त हाम्रो आफ्नै हुन्छ नी । त्यो मान्छे आएर बसेको त हँुदैन । ती कुराहरुले आफै उसले बोलेको शब्दहरुलाई, उसले बोलेका नराम्रा कुराहरुलाई आफ्नो दिमागमा राखेर सोचेर बस्ने गर्छौ ।
त्यसैले हामीले आफ्नो दिमागलाई ‘कन्ट्रोल’ गरेर आफ्नै बसमा राख्नु पर्छ । हामीले नकारात्मक सोच भएका मान्छेहरुसंग संगत ग¥यो, भने हामी पनि विस्तारै नकारात्मक बन्दै जान्छौं । हाम्रा राम्रा कुराहरु पनि नराम्रो सोच्ने नकारात्मक किसिमले हेर्ने मान्छे धेरै हुन्छन् । त्यस्ता मानिसको संगतले धेरै नै गाह्रो छ कि, को आफ्नो, को पराई, कुन साँचो र कुन असल हो र कुन खराव मतलवी मान्छे हो भनेर हामीलाई छुट्याउन गाह्रो हुन्छ ।
जिन्दगीमा एक्लै रमाउन सिक्नु पर्दो रहेछ । सही वाटो, एकलै हिड्नको लागि मज्जा नै वेग्लै हुन्छ । कुनै पनि दुःख कुनै पनि चिन्ता ठूलो हँुदैन । जति हामीले सोचेर त्यसलाई ठूलो बनाई रहेका हुन्छौ । चिन्ता गर्नु भन्दा हामीले जिन्दगी जीउन सिक्न जरुरी छ ।
आफुले आफुलाई बदल्न सिक्नु पर्छ । आफुले आफुलाई राम्रो मान्छे बनाउन सिक्नु पर्छ । चिन्ता गर्नाले केही बदलिदैन । त्यसैले यही हामी बदलियौँ भने जिन्दगी सुन्दर र रमणीय बन्छ । चिन्ताको पछाडी दौडिएर बस्यौँ भने हाम्रो जिन्दगी रोगी बनिदिन्छ ।
त्यसैले तपाई आफुलाई बदल्नुहोस आजैबाट बदल्नुस् र अहिलेबाट नै बदल्नुहोस् । यदी तपाई बदलिनुभयो भने बाहिरी दुनियन आफै बदलिन्छ ।
(लेखक तुलसीपुर, ११ निवासी हुन् )
Previousलाइसेन्सको अनलाइन फारम खुल्यो
Nextराष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन १७ गतेदेखि